သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: October 2009
ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မှာ ဖြန့်ချထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်က သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ့်မျက်လုံးတွေ တော်တော်လေး ပြူးကျယ်သွားတယ်။
အနောက်နိုင်ငံရဲ့ မီဒီယာတွေလည်း လှုပ်ခတ်ကုန်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ New York Times Magazine ထဲက ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာလည်းပါတယ်လို့ဆိုတယ်။ scientific journal တွေထဲမှာလည်း ပါတယ်လို့ဆိုတယ်။ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင် သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ ဒီရလဒ်ကို လူထုကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ လူထုဆီက မယုံနိုင်မှုတွေလည်းရတယ်တဲ့။ University of Texas က Psychologist Prof. Cindy Meston ကိုလည်း Dr. Ray နဲ့ Rachael Ray တို့က ခေါ်တောင်တွေ့ရတယ်ပြောတယ်။
လူတွေ အံ့သြလွန်းလို့ ယုံတာမယုံတာထား။
ကိုယ်ကတော့ မယုံနိုင်အောင် အံ့သြမိတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ အချစ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ ကိုယ်ထင်ထားခဲ့မိတာကိုး။
သိပ်ပြီးဘ၀ဆိုးလွန်းတဲ့ မိန်းမတွေအတွက်ကတော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု တစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ အချစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အရာလို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့တာ။
မိန်းမတွေ ဘာဖြစ်လို့ လိင်ဆက်ဆံကြသလဲတဲ့…….။
သုတေသနမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အချက်တွေကတော့….. မီဒီယာတွေကို တုန်လှုပ်စေလား မတုန်လှုပ်စေလားတော့ မသိ။ အိမ့်ချမ်းမြေ့ကို တုန်လှုပ်စေတယ်။
မိန်းမတွေ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အချက်ပေါင်း ၂၃ရ ချက်ထဲက အချို့ကတော့…………..
လက်စားချေချင်လို့ (ကိုယ့်ရည်းစားကို လက်စားချေချင်လို့ မုန်းလို့ သူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ အတူနေပစ်လိုက်တာမျိုး)
ယှဉ်ပြိုင်ချင်လို့ (မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးထဲမှာ ဘယ်သူက ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလဲ)
ကောင်းမွန်တဲ့ ညစာစားပွဲတစ်ခုခုမှာ သွားစားချင်လို့
ဘုရားသခင်နဲ့ နီးချင်လို့ (ဘုရား.. ဘုရား)
အချို့မိန်းမတွေကတော့ အထီးကျန်ဆန်မှုကို ဖြေဖျောက်နိုင်ပေမယ့် အချို့ကတော့ ပိုလို့တောင် အထီးကျန်ဆန်သလို ခံစားရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ.. ကိုယ်ထင်ထားသလို အချစ်တစ်ခုကို အခြေခံတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
မိန်းမတွေလည်း ယောင်္ကျားတွေလိုပါပဲလား…….. ဆိုတာ… ဒီအရွယ်ရောက်မှ ပွင့်လင်းတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုက သုတေသနတစ်ခုရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ်သိလိုက်ရတယ်လေ။
ref: McMartin, P. (2009, October 29). 237 different reasons why women have sex
The Vancouver Sun, p. A5.
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:39 PM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : research
ကျမရဲ့ လမင်းရှိုက်သံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်အကြံပေးကြသော အီးမေးလ်များ၊ ကော့မန့်များတစ်ခုချင်းစီကို လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်လို့ ရှေးဦးစွာပြောလိုပါတယ်ရှင်။ ထိုဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေထဲမှ အောက်ကစာလေးကို ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှလိုပါတယ်ရှင်။ စာအုပ်ကို သေသေချာချာ တစ်ပုဒ်ချင်းစီ review လုပ်ထားပုံကို နှစ်သက်လို့ပါ။
စာအုပ်ကလေးကို ကျွန်တော်အကုန်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ...။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရရင် စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးက စိတ်ကျေနပ်စရာအပြင်အဆင်နဲ့ အရေးအသားတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...။ ကျွန် တော့်အမြင်အတိုင်းပြောတာပါ...။ မြှောက်ပင့်တာမပါပါဘူးခင်ဗျာ...။
“ရုံးကမမများ”...(ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားတယ်နော်...)၊ နီနာ၊ Okanagan လွင်ပြင်ခရီး၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်နှင့် ကလေးများ၏စိတ်ခံစားချက်၊ ပင်ဂွင်နဲ့ဆော်လမွန်တို့ အိမ်အပြန်၊ နောက် ကနေဒါမှာ အလုပ်ရရန် ဘယ်လိုအမည်မျိုးမှည့်မလဲ...စတဲ့ ဆောင်းပါးခြောက်ပုဒ်ကတော့ သုတပိုင်းတွေလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်...။ မလေး..ကြုံတွေ့၊ သိမြင်နေခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို စေတနာနဲ့ ရေးသား ထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်...။
ကျန်တာတွေကတော့ ရသပိုင်းပေါ့...။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဆွေးဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်ပါတယ်။ (၀တ္ထုတွေက မညားတာတွေကိုး...အဟဲ..။)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:19 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : စာစု, စာအုပ်ခံစားချက်
ညကြီးမင်းကြီး ၊ ထပြီးထိုင်နေ
မွေ့ရာတွေလဲ ၊ ကြေမွတွန့်လိပ်
သိပ်စိတ်ညစ်တယ် ၊ သတိပြယ်လွင့်
ခိုတွယ်စရာ ၊ အတည်မကျ။
သစ်ရွက်တွေကြား ၊ ကြယ်လေးငါးပွင့်
စကားပင်အို ၊ ကန်ရေစိုစွတ်
ဟိုမှာလှုပ်လှုပ် ၊ ငုတ်တုတ်လက်ကမ်း
စမ်းလျှောက်သွားနေ ၊ မြက်ချုံတွေထဲ
ဖြည်းနင်းရှပ်ရှပ် ၊ မတ်တပ်ထလိုက်
ခန်းဝကိုလာ ၊ ၀ရန်တာမှာ
သည်မှာတစ်ယောက် ၊ တစ္ဆေခြောက်လှန့်
ကြောက်ကြောက်နှင့်ကြည့် ၊ မျက်နှာလှည့်စမ်း
တည့်တည့်လှမ်းမြင် ၊ အော်ငိုချင်မိ
ငါ ရေနစ်မြှုပ် ၊ ချမ်းပြီးကုပ်နေ
ကုက္ကိုကိုင်းကြား ၊ ငါနေနားလိုက်
ဘုရားရှေ့မှောက် ၊ ဒူးထောက်ရောက်ပြန်။
တစ်ယောက်သောငါ ၊ ငါများစွာမှ
ထလာလွင့်ပါး ၊ မောင့်အနားကို
စကားထွေရာ ၊ ငိုသံပါနှင့်
ဘာမှမကြား ၊ မောင့်အနားမှာ
‘ ထသွားစို့ဆို ၊ မေ့ကိုအိပ်မက်
မမက်ဘူးလား ‘ ၊ တစ္ဆေဖြားယောင်း
မှုန်မွှားစိတ်ဝယ် ၊ အရိပ်ထင်။ ။
(တာရာမဂ္ဂဇင်း ၊ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၂၀ ၊ ၁၉၄၇)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 8:46 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာ, ကြည်အေး
ကြက်သားဗူးသီး၊ ကြက်သားရိုစ် နှင့် ဘဲဥဆားစိမ်သုပ်
ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ စန္ဒကူးမေတို့ မြူးသျှရီတို့ မိုးမိုးစတား တို့ရယ်.. အခြားအခြားသော ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ ဘလောဂါမမလေးတို့ရဲ့လက်ရာတွေကို အားကျတာနဲ့ မလေးလဲ ကိုယ့်လက်ရာအချို့ကိုစုပေါင်းပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
မလေး ချက်သောဟင်းများကတော့ မြန်၊ ကောင်း၊ သက်သာ ပါပဲ။ စိတ်ကလည်း အတော်ရှည်သည်ကိုး။ အိမ်နံမည်စိုးလို့ ဆီလည်း ဘယ်သောအခါမှ သတ်ပြီး မချက်ပါ။ ဆီသတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းလေ.. နေသာတဲ့နေ့ကို စောင့်ပြီး အပြင်ထွက်ချက်ပါတယ်။ အအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေက အိမ်များကလဲ အလုံပိတ်တွေဆိုတော့ vent တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဆီသတ်ချက်ရင် တစ်အိမ်လုံး အလွန်နံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထဲက ဆိုဖာတွေ၊ အကျီ င်္တွေပါ အနံ့စွဲပါတယ်။ ဘယ်လောက်အနံ့စွဲစွဲ မြန်မာထမင်းဟင်းမှလည်း ကိုယ်တွေက အရသာတွေ့တယ် မဟုတ်ပါလား။ တစ်ခါက မောင်နှစ်မတွေ ခရစ်စမတ်ရက်တွေမှာ မြန်မာထမင်းဟင်း အကြီးအကျယ်ချက်စားကြပြီး shopping mall ဘက် ထွက်လာကြတယ်။ အိမ်ထဲမှာနေနေကြတုန်းက အနံ့က ရိုးနေတော့ မသိသာဘူး။ mall အပြင်ဘက်မှာ ကားရပ်ပြီး အပြင်လည်းထွက်လိုက်တာနဲ့ ဆောင်းလေကြမ်းကြမ်းက တိုက်လာတာ၊ ကိုယ်တွေမှာပါလာတဲ့ ဟင်းနံ့တွေက ထောင်းဆို ထလာပါလေရော။ ကုတ်အကျီင်္တွေ၊ ဆံပင်တွေထဲ ကအနံ့တွေက ဆောင်းလေရူးနဲ့အတူ လှိုင်လှိုင်သင်းပါလေရော။ ကားနားမှာပဲ ကုတ်တွေချွတ်ခါ၊ မလေးအပါအ၀င် ဆံပင်နည်းနည်းရှည်တဲ့ အစ်မတွေလည်း ဆံပင်တွေကို (ရော့ခ်ဂီတသမားတွေလို) ခါပီး mall ထဲ အုပ်လိုက်ဝင်သွားကြတယ်။ မ၀င်ခင် တစ်ယောက်ခေါင်းတစ်ယောက် ရှုခိုင်းကြရသေးတယ်.. အဖြစ်က။ အဲလိုနဲ့ The Bay က ရေမွှေးကောင်တာနားရောက်တော့ အကိုတစ်ယောက်က သူ့လက်နံနေတယ်ဆိုပြီး sample တင်ပေးထားတဲ့ ကရမ်ကို သွားယူပြီး လက်ဖ၀ါးမှာ ပွတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါ မိန်းကလေး ကရမ် လို့ဆိုတော့.. နေပစေတဲ့။ အနံ့သက်သာရင်ပြီးရောလို့ဆိုတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျန်တဲ့အစ်မတွေကလည်း sampleရေမွှေးတွေကို လက်ဖမိုးလေးတွေမှာ မသိမသာပွတ်နေကြတယ်။ အကိုက ကရမ်လိမ်းပြီးတော့ အခြေအနေဘယ်လိုလည်းဆိုပြီး မပြောမဆို မလေးရဲ့နှာခေါင်းနားလာကပ်ပြီး သူ့လက်ကြီးရှုခိုင်းတာ၊ မေ့ မတတ်ကိုဖြစ်သွားတယ်။ ဟင်းနံ့နဲ့ ကရမ်အနံ့ရောထားတာ ဘယ်လိုနေမလည်း စိတ်သာကူးကြည့်ကြပါတော့။ အဲဒီနေ့ကလည်း London Drugs ထဲမှာ စက်ပစ္စည်းတစ်ခု သွားကြည့်တာ ရောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ မလေးတို့တွေရဲ့ အနားကနေ သိသိသာသာကို ရှောင်ထွက်သွားကြတယ်။ အဲသလောက်ကို ဖြစ်တာပါ။ ဟင်းချက်တာ မပြောခင် အနံ့အကြောင်း ဘယ်လိုရောက်သွားပါလိမ့်နော်.... ပြန်ဆက်ပါမယ်။
အဲဒီနေ့က နေသာတယ်.. ။ ရှားရှားပါးပါး ကနေဒါရဲ့အောက်တိုဘာမှာ နေသာတဲ့နေ့ကလေးမို့ နောက်ဘက်ဝရံတာမှာထွက်ပြီး ကြက်သားဗူးသီးဟင်း ချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါတောင် လုံးပြီးချက်တာပါ။
လာပါပြီ... ကနေဒါဗားရှင်း ကြက်သားဗူးသီး
(ပြင်ဆင်ချိန်မှ ကျက်သည်ထိ - ၄၀ မိနစ်)
ကြက်သားကို အနေတော် အတုံးတွေတုံး၊ ကြက်သွန် ဖြူ၊ နီ၊ ဂျင်းကို စက်ထဲ ထည့်ကြိတ်၊ ပြီးတော့ အိုးထဲမှာ ကြက်သားတွေရယ်၊ ကြက်သွန်တွေရယ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အရောင်တင်မှုန့် အကုန်ထည့်ပြီး မီးပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:16 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ချက်နည်းပြုတ်နည်းများ
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေ ဆိုတတ်၏
ညီမလေး နှင်းဟေမာက ခုတစ်လောဆိုဖြစ်တဲ့သီချင်းလေးတွေကို တင်ပေးဖို့တဂ်ထားတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မောင်နှမတွေစုပြီး စန္ဒယားတီးရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဂစ်တာစုတီးရင်းဖြစ်ဖြစ် ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ တစ်ထောင့်ကိုးရာရှစ်ဆယ်ခုနှစ်တွေတုန်းက သီချင်းတွေဖြစ်တဲ့… ခိုင်ထူး၊ ထူးအိမ်သင်၊ စိုးလွင်လွင်၊ မွန်းအောင်… အဲဒါတွေကို ဆိုဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးသီချင်းတွေကတော့ အဲဒီခေတ်က ကိုကိုတွေ၊ မောင်တွေ၊ အချစ်တွေနဲ့ နွဲ့လွန်းလို့ မဆိုရဲဘူး၊ သိပ်လည်းနားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ အိမ်နောက်က မန်းကျည်းပင်အောက်မှာ လသာညတွေမှာ မောင်နှမတွေစုတိုင်းလည်း ယောင်္ကျားသီချင်းတွေပဲ ဆိုနေတာနဲ့ ယောင်္ကျားသံကြီး ဖြစ်မသွားတာ ကံကောင်းလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
အဲဒီတုန်းကတော့ အဖေဖွင့်လို့ ဆိုင်းထီးဆိုင်ကို စိတ်မပါဘဲ နားထောင်ဖူးတယ်။ ဦးလေးဖွင့်တဲ့ ရေဒီယိုက စန္ဒယားလှထွတ်တို့ တွံတေးသိန်းတန်တို့ကို ပြုံးရယ်ခဲ့တယ်။
ကနေဒါကို ရောက်စကတော့ အနောက်တိုင်းသီချင်းတွေထဲက ပေါ့ပ်ဂီတကို နှစ်သက်စွာနားထောင်ဖြစ်တယ်၊ ဆိုဖြစ်တယ်။ မြန်မာသီချင်းတွေထဲမှာတော့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သီချင်းတွေကို တဖြည်းဖြည်း နှစ်သက်လာတယ်။ အနေဝေးတာကြာတော့ အခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေကိုနားထောင်ပေမယ့်လည်း ငယ်စဉ်ကသီချင်းတွေလို ရင်မှာစွဲကျန်မနေတော့ဘူး။ နောက်ပိုင်းအဆိုတော်တွေကိုလည်း သိပ်မသိတော့ဘူး။ အရွယ်ကလည်း စကားပြောလာတာဖြစ်မှာပါ။ ဒီမှာ အနေကြာလာလေလေ.. တစ်ကယ်နားထောင်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ သီချင်းတွေက သက္ကရာဇ်တွေရဲ့ ဟိုးဘက်က သီချင်းတွေဖြစ်လာတယ်။
ခုတစ်လောတော့ ဆိုဖြစ်နေတဲ့သီချင်းလေးတွေထဲက ရင်ထဲ စွဲစွဲနစ်နစ်ရှိနေတဲ့ နှစ်ပုဒ်… ပထမ တစ်ပုဒ်ကတော့ ဖွင့်ပြီးဆိုရတာဆိုတော့ အရမ်းအားရတယ်။ ဒုတိယတစ်ပုဒ်ကတော့ အသက်အောင့်ပြီး ဆိုရတဲ့သီချင်း။ ညီမလေးနှင်းဟေမာအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစ်မ ပြောထားသလိုပဲ မငိုရဘူးနော်…
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ ပထမသီချင်းကို ပန်းကန်ဆေးရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဟင်းချက်ရင်းဖြစ်ဖြစ် အော်အော်ဆိုတိုင်း အိမ်မှာရှိတဲ့လူကုန် အိမ်အောက်ကို သိသိသာသာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသိမသာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆင်းဆင်းသွားကြလို့…
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:13 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
“Dwelling online isacowardly and utterly enjoyable alternative to real interaction.”
စစ်မှန်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကို ရှောင်လွှဲချင်ကြတဲ့အတွက် လူတွေအွန်လိုင်းတွေပေါ်မှာ အချိန်သုံးနေကြတယ်။ အဲလိုအချိန်တွေသုံးနေတာဟာ သူရဲဘောဆန်လွန်းစွာ နဲ့ အတိုင်းထက်လွန်စွာ ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ New York Times ရဲ့ Op-Ed writer ဖြစ်တဲ့ Alice Mathias ကဆိုပါတယ်။
အဲဒါက အရင်ကတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ချေက အလွန်နည်းလာပါပြီ။ လူတွေက facebook၊ my space၊ twitter၊ tagged တွေကို အသုံးပြုပြီး အချင်းချင်းဆက်သွယ်လာကြတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကုန်လုံးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချပြလာကြတယ်။ အဲသလိုချပြလာတဲ့အခါမှာ real interaction တွေဖြစ်လာတယ်၊ အကောင်းတွေကော အဆိုးတွေကော ဖြစ်စေတယ်၊ အဆိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ တစ်ကယ်ပဲ ပျော်စရာကောင်းသေးလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။
အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebook ဆိုတာပေါ်နေတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မနှစ်က မြန်မာပြည်ပြန်တော့မှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အကောင့်လေးတစ်ခုကို အဲဒီတော့မှ ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အကောင့်ထဲမှာ ကျောင်းတုန်းက ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း အယောက်သုံးဆယ်ထက် မပိုတဲ့ကျွန်မ၊ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ သတင်းကို သူငယ်ချင်းတွေကို သိစေချင်တဲ့အခါကလွဲပြီး အခြားဘာဓာတ်ပုံမှကို မတင်တဲ့ ကျွန်မလို လူမျိုးတွေသာ များနေရင်တော့ facebook လဲ စီးပွားရေးကျမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကျွန်မ အမြင်မှာတော့ လူသန်းသုံးရာလောက်သုံးနေတဲ့ facebook မှာ သုံးသူတော်တော်များများမသိတဲ့ အချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ဈေးကွက်အမြတ်အတွက် အသုံးချနေတာကိုပါပဲ။ facebook အနေနဲ့ နာမယ်ကြီးကွန်ပြူတာဂိမ်းတွေနဲ့ quizzes တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချတဲ့ third-party developers တွေကို facebook သုံးတဲ့လူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ကြိုက်သလိုယူခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုပြုပြင်ပေးရန် ကနေဒါနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာများက တောင်းဆိုထားပါတယ်။ နောင်နှစ်နွေရာသီအထိ ဒါကိုပြင်ဆင်ပေးရန် facebook ကို အချိန်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အချို့တွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို စီးပွားရေးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားနေရာတွေမှာဖြစ်ဖြစ် third-party တွေက အသုံးချနေတာ အရေးမကြီးနိုင်ပေမယ့်၊ ကျွန်မအတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ဒီလိုအသုံးပြုနေတာကို သိပ်မနှစ်သက်လှပါဘူး။ ဒါဟာလည်း လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ခံယူချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့က ပွင့်လင်းတယ်။ အချို့က ပရိုက်ဗိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ သိပ်ပွင့်လင်းရင်လည်း မကောင်းသလို၊ သိပ်ပြီးလျှို့ဝှက်လွန်းခြင်းဟာလည်း မကောင်းပါဘူး။ သိပ်ပွင့်လင်းလွန်းတဲ့အခါမှာ အောက်ကအဖြစ်မျိုးလေးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:51 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကြမ်းတမ်းစွာ အက်ရှတဲ့ လေပြင်းတွေကြားမှာ
မြက်ပန်းဖြူလေးတွေ၊ dandelion နဲ့ clover စိမ်းစိမ်းတွေ
လမ်းပေါ်က သစ်ရွက်ခြောက်တွေကို ရက်စက်စွာနင်းဖြတ်ရင်း ….
ပုပ်ပျက်သွားမယ့် ခြေတစ်စုံကို ငုံ့ကြည့်ရင်း...
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:49 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာမဟုတ်တဲ့ကဗျာများ